किन चर्किन्छ घर? चर्किन नदिन... :: रवीन्द्र शाही :: Setopati
किन चर्किन्छ घर? चर्किन नदिन के गर्ने?
इन्जिनियरिङको भाषामा घर चर्काइको स्वरुपलाई दुई प्रकारमा वर्गिकरण गर्न सकिन्छः संरचनात्मक र गैरसंरचनात्मक। संरचनात्मक चर्काइ गलत डिजाइन, खराब निमार्ण वा अधिक भारको कारण हुन्छ। यसले भवन र आफ्नो नजिकको भागहरुको सुरक्षामा खतरा पार्ने गर्छ।
गैरसंरचनात्मक चर्काइ भवन निर्माण सामाग्रीहरुमा उत्पन्न हुने आन्तरिक तनावको कारण आउँछ। यी चर्काइहरु सामान्यतया सुरक्षाको लागि खतरापूर्ण छैनन् तर हेर्दा भने नमिल्दो, खराब कामको छाप पर्ने वा अस्थिरताको भावना जगाउने खालका हुन्छन्।
तर यी कारणहरु मध्ये पनि सही क्रंकिटको प्रयोगको अभावमा धेरै जसो घर चर्किने गरेको देखिन्छ।
कंक्रिट भनेको डण्डीमा सिमेन्ट, बालुवा, रोडा र पानीको उचित मिश्रण हो। तर यो म्रिश्रण तयार गर्दा कम गुणस्तरको प्रयोग गरिँदा वा उचित अनुपातमा तयार नगरिँदा क्रंक्रिट बलियो बन्दैन्।
यदि क्रंक्रिट बलियो भएन भने त्यसभित्र पानी र अन्य रसाइन सजिलै पस्ने गर्छ जसले त्यसको भारबहन क्षमता कम गराउँदै लैजान्छ र तीव्र गतिमा मसिना प्वालहरु पार्छ।
यस्ता समस्या सामान्तया कम ग्रेड (गुणस्तर) को सिमेन्ट, बालुवा, रोडा प्रयोग गरिँदा देखा पर्ने गर्छन्। परिणामस्परुप यसले घरमा प्वालहरु बनाउँछ गर्छ।
मसिनो प्वाल वा चर्काइहरु साधारणतया कंक्रिटमा हुने गर्छन्। सामान्यतया गहिरो नहुने भएकाले सुरुमै कंक्रिटले खतरा पुर्याउने गर्देन्।
तर समयक्रमसँगै तापमानमा भिन्नता, मौसम र भारको अवस्थामा आएको परिवर्तनका कारण तीनीहरु गहिराई, लम्बाई चौडाईमा बढ्ने जान्छन् र अन्तत त्यसले भर चर्केको स्पस्टसँग देख्न सकिन्छ।
यदि तँपाईको घरमा पनि यस्तै समस्या देखा परेको छ भने त्यसको मर्मत गर्नु तत्काल आवश्यक हुन्छ।
त्यसो भए कसरी तयार गर्ने त उचित मिश्रण?
क्रंक्रिटको क्षमता सिमेन्ट, बालुवा र रोडोको मिश्रणमा भर पर्छ। यसको उचित मिश्रणले घरको आयु बढाउँछ। सुख्खा सिमेन्ट, बालुवा र रोडाको उचित अनुपातमा आवश्यक पानीको मात्रा मिसाएर राम्रोसँग घोल्ने गर्नुपर्छ। यसरी तयार भएको क्रंक्रिटलाई २ घण्टाभित्रमा प्रयोग गरिसक्नु पर्ने हुन्छ।
मिश्रण बनाउन ‘एम२० ग्रेड १ः१.५ः३ अर्थात १ बोरा सिमेन्टमा १.५ बोरा बालुवा र २ बोरा रोडा मिसाउनुपर्छ। यसमा पानीको मात्रा भने सिमेन्टको आधा हुनुपर्नेछ।
तर यो ग्रेड सम्भव नभएमा कम्तीमा १ः२ः३ को अनुपात अर्थात एक बोरा सिमेन्टमा २ बोरा बालुवा र ३ बोरा रोडामा भने हुनैपर्छ।
यसरी बढ्दै जान्छ क्रंक्रिटको क्षमता
बलियो घरको आधार उचित मिश्रणको क्रंक्रिट नै हो। उचित अनुपातको मिश्रणले समयसँगै कंक्रिटको क्षमता वृद्धि गराउँदै लैजान्छ।
क्रंक्रिट तयार गरिएको एक दिनमा यसको क्षमता १६ प्रतिशतले बढ्छ भने ३, ७ ,१४ र २८ दिनमा क्रमशः ४०, ६५, ९० र ९९ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ।
त्यसैले घर बनाउँदा यस्तो क्रंकिटलाई २८ दिनसम्म अन्य भार दिनुहुँदैन्। २८ दिन पछि मात्रै कंक्रिट संचरनाको प्रयोग वा अरु काम गर्न उचित हुन्छ।
कंक्रिटको क्षमता सिमेन्ट र पानीको प्रतिक्रियाको नतिजा भएकाले सो अवधिसम्म निरन्तर रुपमा क्रंक्रिटमा पानी लगाइरहनु पर्छ। यसले घरलाई मजबुत बनाउन सहयोग गर्छ।
(गैरे मेरो घर डटकम नामक संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। उक्त संस्थाले घरसम्वन्धी डिजाइज, संरचना, मर्मत, वास्तु, डिजाइन लगायतका काम गर्दै आएको छ। यसका अलवा उनी नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन पूर्वाधार विकास समितिका सहअध्यक्ष समेत हुन्।)
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक २७, २०७४, ०१:०५:४०